Gabaryahay Ka Fogoow Shantaan Nooc Ee Ragga Kamid-ka Ah | Aayaha
Haweeney kasta oo wanaagsan waxay mudantahay nin kasii wanaagsan oo ula dhaqmaya si wanaagsan isla markaana dhisaya xiriir wanaagsan oo qurux badan.
Hadaba iska ilaali ninka leh tilmaamaha hoos ku xusan
Haweeney kasta oo wanaagsan waa inay heshaa nin dadaal badan oo hami dhab ah leh, ninka caajislowga ah waxba kuuma haayo mana dhisan karo mustaqbal wanaagsan, haweeney kasta oo wanaagsan waxay u qalantaa nin wanaagsan.
2. Ninka gardarrada badan
Nin ku dharbaaxaya ama kula dagaalamaya, kugu jeesjeesaya isla markaana ku xushmad dareeynaya waa inaad si walba uga fogaataa, haweeney kasta oo wanaagsan waxay u qalantaa nin si wanaagsan ula dhaqma oo kalgacayl iyo xushmad leh.
3. Ninka ka baqa inuu dusha ku saarto
Ninka ka baqa inuu kuu guntado oo madaxa ku saran waa nooca u baahan inaad iska ilaalisid, ninka noocaas ah waa mid la arki karo oo aanan lahayn mustaqbal ama go’aan, waxaad istaahishaa mid ka wanaagsan kaas.
Waxaad u qalantaa oo aad mudantahay mid ka wanaagsan kan ku qiyaanaya marka uu fursad kugu helo, haween farabadan waxay aaminsanyihiin inay isbedel ku sameyn karaan ragga noocaas ah balse naftooda oo kaliya ayay qiyaanaan, haddii uusan isbedelin inta aad shukaansaneysid waxaad wajahaysaa xaalad xun marka uu xiriirka sii koro.
5. Ninka hal wax kugu raba
Ninka kugu raba galmo ama lacag ama waxyaabo kale waa kan loo baahanyahay in haweeney kasta oo wanaagsan ay iska ilaaliso, dhab ahaantii waxaad u qalantaa nin ka wanaagsan kan kugu raba dibka weynkaa ama lacagta aad heysatid walaaleey.
Haweeney kasta oo wanaagsan waxay u qalantaa nolosheeda inay hesho nin wanaagsan.
Waa goorma waqtiga saxda ah ee la guursado? 4 waxyaabood oo laga fekero!